Famatsiana herinaratra eto Iarivo – Nahatratra 33 km ny taribin-jiro efa nisy nangalatra - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Famatsiana herinaratra eto Iarivo – Nahatratra 33 km ny taribin-jiro efa nisy nangalatra
Andraikitry ny rehetra ny miambina itony fananana iombonana itony araka ny fanentanan'ny orinasa Jirama
Ripaka ny taribin-jiron’ny Jirama amina fokontany maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Miaina ao anatin’ny haizina
tanteraka izy ireo noho izany.
« Efa nahatratra 33 km ny refin’ny tariby very nandritra ny fiandohan’ ny taona ka hatramin’ny volana mey teo », araka ny fampitam-baovao azo teo anivon’ny orinasa Jirama.
Io tranga io no nanamafisan’ny avy ao amin’ ny Jirama fa antony maha- tonga ny fahatapahan’ny herinaratra matetika amin’ireo faritra ireo.
Ny eny Ambanidia, Ambatoroka, 67 Ha, Anjanahary, Antsahamamy -Ankatso ary Ankorondrano no isan’ny tena ahitana izay fangalarana tariby amin’ny andrin-jiron’ny Jirama izay matetika. Lasibatra ihany koa anefa ireo faritra manodidina ny renivohitra, raha ny voalazan’ny teny anivon’ ny orinasa Jirama hatrany.
Efa mila tsy haharaka ny fanamboarana sy ny fanoloana sahaniny mihitsy ny Jirama manoloana izany. Faritra telo na efatra isan’ andro no anatanterahan’ ny orinasa fanoloana taribin-jiro. Ny Jirama manontolo no mizaka ny fatiantoka ary manodidina ny Ar 25 tapitrisa no lany amin’izany.
Etsy andaniny dia mitaraina koa ireo mponina amin’ireo toerana isian’ ny halatra tariby noho ny voalaza fa fitarazohan’ ny famerenana amin’ny laoniny izay voasompatra. Tsy maintsy ny fokontany no manao ny taratasy fampandrenesana ny Jirama ary miankina amin’ ny fandaminana asa no hiverenan’ny herinaratra, raha ny fanazavana nomen’ny Jirama.
0 Fanehoan-kevitra	Lahatsoratra hafaMiverena @ pejy fandraisana
Tafakatra 80 mahery indray hatramin’ny omaly ireo tratran’ny fahapoizinana ara-tsakafo, tonga tetsy amin’ny hopitaly Hjra. Mbola ireo marary, nandritra ny fanatrehana lanonana nandritra ny mariazy miara-mizotra teny Itaosy hatrany ireo tonga nanatona hopitaly ireo. “Rehefa nojerena tany Itaosy ireo fianakaviana nanatrika lanonana dia mbola nahitana olona telo tena marary mafy ka voatery nampidirina eny amin’ny hopitaly Itaosy. Arahi-maso akaiky mihitsy ny fahasalaman’izy ireo”, hoy Dr Rajemiarimoelisoa Felana, avy amin’ny sampan-draharaha manara-maso ny
Olana mbola tsy mety voavaha. Ny vahoaka madinika hatrany no iharan’ny tsy rariny. Mbola tsy milamina hatramin’ izao ny famatsiana oksizena eny anivon’ny hopitalim-panjakana eto an-drenivohitra. Voalaza fa ny mbola tsy nandoavan’ ny minisiteran’ny Fahasalamana ny volan’ ny mpamatsy oksizena hatrany no mahatonga izany. « Voatery amboarina ny fandefasana oksizena eto amin’ny hopitaly. Atsahatra izany manomboka amin’ny 1 ora alina ka hatramin’ny 4 ora maraina », hoy ny mpitsabo iray etsy
Notontosaina tetsy amin’ny sekoly Esca Antanimena, omaly ny andron’ny sekoly katolika eto Antananarivo. Samy nandefa ny solontenany teny avokoa ireo sekoly katolika teto an-drenivohitra sy ny manodidina. «Ny anio ny ho avy fa tsy ny ampitso», io no teny filamatr’ireo sekoly rehetra nentina nanamarihana ity andron’ny sekoly katolika ity. «Efa fanao isan-taona ny hetsika sahala
Malaza amin’ny fananana karazan-java-boary maro i Madagasikara. Mihena anefa ny habetsahan’ny rano noho ny fiovaovan’ ny toetr’andro. Io rano io no fototra iorenan’ireo karazan-java-boary. Anisan’ireo tena mila rano betsaka indrindra ny fambolem-bary. Tsy mitsaha- mikaroka izay fomba entina hampiroboroboana ny sehatry ny fambolem-bary anefa ireo manam-pahaizana malagasy. «Mitarika ny faharitan’ ny rano ny fiovaovan’ny toetr’andro. Ny firenena tsirairay dia tokony hijery
Fanambadiana ho an’ny rehetra – Lalàna tokana mampivady ny lahy sy ny vavy ihany no misy eto(0)
Samy manana ny heviny ireo vahoaka malagasy manoloana ny faneken’ny tany Frantsa ny fanambadian’ny lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy. Ny lalàna eto amintsika anefa rehefa notomorina dia hita fa tsy mankasitraka izany. “ Ny lalàna momba ny fanambadiana eo amin’ ny samy hafa taovam-pananahana ihany no manan-kery eto amintsika. Nosokajian’ny Fitsarana ho anisan’ny mifanohitra amin’ny natiora ny fiarahana na firaisan’ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy”, hoy Ralambondrainy Rakotobe Nelly, filoham-boninahitra voalohany ao amin’ny Fitsarana Tampony. “Tsy mifanaraka amin’ny maha Malagasy mihitsy izany fomba izany. Ny zanaka no harena ho an’ny Malagasy, nefa
Lahatsoratra nampiasa ny teny miverina matetika:
Angovo, JIRAMA, Mpanoratra Rijakely, 05.07.2012, 09:13	FIARAHAMONINA